“Mbola ho Hitantsika Ihany Izy Ireo” | Diary 2015
“Mbola ho hitantsika ihany izy ireo indray andro any”
Nanomboka namaky Baiboly i Pablo González, tamin’ny 1935 tany ho any, tao amin’ilay faritra atao hoe Lohasahan’i Cibao. Nivavaka tany amin’ny Protestanta izy. Vetivety anefa izy dia niala, satria tsy nifanaraka tamin’izay nianarany tao amin’ny Baiboly ny fitondran-tenan’ny olona tao. Nianatra Baiboly samirery foana anefa izy, ary noresahiny tamin’ny hafa ny zavatra nianarany. Ny fianakaviany sy ny mpiray tanàna taminy no niresahany voalohany, ary avy eo ny olona tany amin’ny tanàna teny akaiky teny. Namidiny ny toeram-pamboleny sy fiompiany ary ny ombiny, mba hahazoany vola ho entiny mitory.
Fianakaviana 200, fara fahakeliny, no efa notsidihin’i Pablo, hatramin’ny 1942. Nitarika fivoriana tsy tapaka izy, na dia mbola tsy nihaona tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah aza. Nampirisihiny hianatra Baiboly ny olona sady hampihatra izay lazain’izy io. Maro àry no niala tamin’ny sigara sy tsy nampirafy intsony.
Iray tamin’ireo nandre ny hafatra notorin’i Pablo i Celeste Rosario. Hoy izy: “Anisan’ireo antokon’olona niaraka tamin’i Pablo González i Negro Jiménez, dadatoanay, tamin’izaho 17 taona. Nitsidika anay i Dadatoa ary namaky andinin-teny vitsivitsy taminay. Izay fotsiny dia efa nahatonga ahy ho tapa-kevitra hiala tany amin’ny Katolika. Tsy nisy azonay mantsy ny zavatra novakina tany am-piangonana, fa tamin’ny teny latinina. Nitsidika anay koa i Pablo González taoriana kelin’izay, ary nampahery anay. Hoy izy: ‘Isika tsy anisan’ireo fivavahana rehetra fantatsika ireo, fa misy rahalahy sy anabavintsika eran-tany. Tsy fantatsika izy ireo izao, sady tsy haintsika ny fivavahany, nefa mbola ho hitantsika ihany izy ireo indray andro any.’”
Efa nisy antokona mpianatra Baiboly niaraka tamin’i Pablo tao Los Cacaos Salcedo, Monte Adentro, Salcedo, ary Villa Tenares. Nahita Vavolombelona nitory teny an-dalana i Pablo, tamin’ny 1948, rehefa nijanona kely tao Santiago mba hiova bisy. Nomen’izy ireo Tilikambo Fiambenana izy. Nisy anabavy nanome azy boky roa tamin’ny diany hafa, sady nanasa azy hanatrika Fahatsiarovana tao Santiago. Tonga tokoa izy ary tena nampiaiky azy ny zavatra reny tao. Resy lahatra izy hoe nahita ny fahamarinana, ary tsy iza ireo olona nanatrika teo fa ireo olona notadiaviny hatry ny ela.
Nitsidika an’ireo olona nianatra Baiboly tamin’i Pablo ny misionera. Olon-dehibe 27 no efa niandry azy ireo, tao amin’ny toeram-pivoriana iray. Nisy tamin’izy ireo nandeha an-tongotra 25 kilaometatra mba hahatongavana tao. Ny hafa indray nitaingin-tsoavaly tamin’ny lalana 50 kilaometatra. Nankany amin’ny toeram-pivoriana iray indray izy ireo, ary 78 ny mpanatrika tao. Tany amin’ny iray hafa kosa nisy 69.
Nomen’i Pablo anarana olona liana 150 teo ho eo ireo misionera. Olona nanetry tena sy tia an’Andriamanitra izy ireo, ary efa nianatra Baiboly sy nampihatra ny toro lalana tao. Fandaminana sy tari-dalana fotsiny sisa no nilainy. Hoy i Celeste: “Nitsidika anay ireo misionera ary nandamina fivoriana. Natao batisa koa ireo nahafeno fepetra. Izaho no natao batisa voalohany tamin’ny fianakavianay. Natao batisa koa ny mamanay, izany hoe i Fidelia Jiménez, sy Carmen rahavaviko.”
Natao tao Santiago ny fivoriamben’ny faritra voalohany teto amin’ny Repoblika Dominikanina, tamin’ny 23-25 Septambra 1949. Vao mainka nampandroso ny asa fitoriana izy io. Maro ny olona tonga, satria mba te hahalala zavatra fotsiny. Tafakatra 260 ny isan’ny mpanatrika ny alahady, tamin’ny lahateny ho an’ny besinimaro. Nisy 28 no natao batisa. Noho iny fivoriambe telo andro iny, dia maro tamin’ireo vaovao no resy lahatra hoe ny fandaminantsika no ampiasain’Andriamanitra mba hanatanterahana ny sitrapony.
Tonga ny misionera Lennart sy Virginia Johnson
Fivoriamben’ny faritra voalohany
Nisy 28 no natao batisa tao amin’ny Reniranon’i Yaque Avaratra
Voarara ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah